Ego-trip | ZAYYA
“သန္တိ” သို့ →
လေးနက်မှု နှင့် လေးပင်မှုသည် မတူညီ။ သို့သော် ထိုအရာတို့ ၏ ခြားနားမှုကို မသိ။ မကြာခဏ ပင် ရောထွေးလေ့ ရှိကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဘာဝနာ ကို အများစု က ~ လေးပင် နေသော အရာ ဟု ထင်မှတ်ကြ သည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ပေ။ ဘာဝနာ သည် တေးသွား ဂီတ၊ အက ဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ် ဖြူစင်သော သဘာဝ ဂီတ၊ သဘာဝ အက ဖြစ်သည်။ ချမ်းမြေ့ ကြည်စင်သော၊ ပေါ့ပါး သော အရာ ဖြစ်သည်။
စင်စစ် လေးနက်မှု လေးပင်မှု ဟူသည်မှာ စိတ်ကူး အတွေး၏ အရာ သာ ဖြစ်၏။ ဘာဝနာ သည် ထို စိတ်ကူး အတွေးအတွင်း ၌ မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် လေးနက် သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် စိတ်အတွေး၏ အလွန် သို့ မည်သည့် အခါမျှ ရောက် မသွား။ ဘာဝနာ စင်စစ်ကို မရရှိ။
ဘာဝနာ သည် စိတ်အတွေး၏ အလွန်၌သာ တည်ရှိသည် ဖြစ်သောကြောင့် ဘာဝနာ စင်စစ် ရရှိထားသူ အတွက် ၎င်း၏ ဘဝသည် စိတ်အတွေး တို့ဖြင့် လေးလံ မနေပေ။ ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ ~ ဘာဝနာ ထုံမွှမ်းသည် ဆိုလျက်နှင့် စိတ်အတွေး အတွင်း ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ~ အရာရာ သည် ၎င်းအတွက် လေးပင်နေမည်သာ ဖြစ်၏ ။ ယင်း စိတ် အတွေး ၏ တန်ခိုး စွမ်းအား ဖြစ်သော~ ဝေဖန် ပိုင်းဖြတ်မှု၊ တုပ်နှောင် ဆွဲငင်မှု ကို ကျွန်ပြု ခံစားနေရ မည်ချည်းသာ ဖြစ်၏။
သို့ဖြင့် စိတ် အတွေး ကို သခင်အရာ ထား၍ မိမိ ဘာသာ ကျွန်ဖြစ်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ သည် စိတ်ကြောင့် သာ လေးနက် နေရခြင်း ကို အကယ်စင်စစ် လေးနက်မှု ( Seriousness ) ဟူ၍ ခုံမင် တပ်မက်လာ တတ်သည်။ တည်ကြည်သော ၊ ကြည်လင်နေသော သူတစ်ထူး ၏ အဖြစ်ကို စိတ်ကူး ဖြင့်သာ မှန်းဆ ၍၊ မြင်ယောင် လိုလား၍ လေးနက် တည်ကြည်ဟန် ပြုကြသည်။ စင်စစ် လေးနက် မှုန်ကုပ်နေသော သန္တာန်သည် ဘာဝနာ ပြုမှ မဟုတ် ~ နေရာ တော်တော် များများတွင် တည်ရှိနေကြပါသည်။
ဥပမာ ~ စိတ်ကူး အကြံ အစည် ထုတ် ၍ လုပ်ကိုင်ကြ သော စစ်တုရင် ကစား နေသူ များ၊ ပိုကာ ရှိုး ကစား နေသူ များ မှ စ၍ ~ ကမ္ဘာ့ အရေး အရာ၊ ဒဿနိက ရေးရာ များ တွေးခေါ် နေကြသူ များ အထိ အစေ့ အငှ ရှုကြည့် နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ အပြည့် အဝ လေးနက် နေနိုင် ပါသည်။ သူတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလေး အနက် အထားဆုံး သူများ လည်း ဖြစ်နေ နိုင်သည်။ လေးနက်မှု များ လွန်ကဲနေ လွန်း၍ ရူးမတတ် ဖြစ်နေကြသည်ကိုပင် တွေ့ရမည်။
ဘာဝနာ သည် စိတ်အတွေးအကြံ၏ ကျေးကျွန် မဟုတ်ပေ။ စိတ်အတွေးအကြံ၏ အလွန်တွင်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်အတွေး တို့၏ လေးပင် နေမှု အတွင်း၌ ဘာဝနာသည် စင်စစ် မဖြစ်ပွားနိုင်ဟု ကျနော် ဆိုပါမည်။ သူသည် စိတ်အတွေးကို လွန်မြောက်၍ သာ ပေါ့ပါး လန်းဆန်း လျက် တည်ရှိ သည်။ ထို့ကြောင့် ဘာဝနာနှင့် ထုံမွှမ်းပြည့်ဝ သူ ကို စိတ် အတွေးအကြံက တစ်စုံတစ်ရာ အနှောက် အယှက် မပြုနိုင် ဟု ဆိုပါမည် ။
လေးနက် လေးပင် နေ ဟန် ရှိမှ ဘာဝနာ ပြုသူ ဖြစ်သည်ဟု အထင် ရောက်ကြသူ များ ရှိကြပါသည်။ ယင်းမှာ မှားယွင်းသော လမ်းသာ ဖြစ်၏။ လေးပင်သော ဟန်အမူအရာမျိုးများဖြင့် တည်တည် ခန့်ခန့် စန့်စန့်ကြီးများ သည် စင်စစ် ဘာဝနာ ဖြစ်မလာပေ။ မိမိ အတ္တ အိမ်ကို မိမိ ဘာသာ ကြီးမားအောင် တည်ဆောက် နေကြသူ များသာ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ ၏ သန္တာန်၌ “ငါသည် ဘာဝနာ ပြုနေ သူ ဖြစ်သည်။ ငါသည် လူတကာ ထက် မြင့်မြတ်သူ ဖြစ်သည်။ ဘာဝနာ ၏ မြင့်မြတ်သော အဖြစ်ကို ငါ ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည်။ ငါသည် မြင့်မြတ်သူ အဖြစ် တည်ကြည်ခံ့ညားစွာ တည်ရှိ၏” ဟု မိမိရင်ကို မိမိ ဘဝင် ဆောင့်လျက် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ပင် စိတ်၏ နူးညံ့သော ၊ အသိရ ခက်သော အချယ်လှယ် အမှောင့်၊ အနှောက်အယှက် ကို ခံရ၍ Ego-game အတ္တကစားပွဲ အတွင်း မိမိ ဘာသာ မိမိ ကျင်လည် နေသူ တစ်ဦး သာ ဖြစ်လာရသည်။ ထိုသူမျိုးသည် စစ်တုရင်ကစား၊ ဖဲကစားနေသူထက် ပို၍ ရူးမိုက်သွား နိုင်သော အလားအလာ ပိုများပါသည်။ ဘာဝနာ စင်စစ် မရရှိသည် မဟုတ်။
ထို့ကြောင့် လေးပင် တည်ကြည်ဟန် ပေါက်နေသော ဘာဝနာ ပုံစံ အားလုံး ကို ကျနော် ဆန့်ကျင်သည်။ ဘာဝနာသည် ကြည်လင်သော အသိ သက်သက်မှ လွဲ၍ ခက်ထန် လေးနက်စရာ အဘယ် တစ်ခုမျှ ရှိမနေပေ။ ဘာဝနာ အမှုေ ကြာင့် တစ်ခဏတိုင်းတွင် ကြည်လွင် ပျော်ရွှင်နေခြင်း သက်သက် သာ ရှိသည်။ ထိုမှ လွဲ၍ ဘာမျှ ရှိမနေပေ။ ပန်းတိုင်များ၊ အလိုဆန္ဒများနှင့်လည်း မောပန်း မနေပေ။ ဘာဝနာဖြင့် အတိပြီး လျက် နေထိုင်လာသည့် အခါ ~ မိမိ နှင့် မိမိ ပတ်ဝန်းကျင် လောက သည် စင်စစ် ရယ်မော ရွှင်ပြုံးဖွယ်ရာ သာ အတိ ပြီးလျက် ရှိကြောင်း၊ Cosmic Funny ဖြစ်လျက် ရှိကြောင့် သိမြင်ရနိုင်သေးသည်။
Meditation is not anything of the mind, it is something beyond the mind. And the first step is to be playful about it. If you are playful about it mind cannot destroy your meditation. Otherwise it will turn it into another ego trip; it will make you very serious.
Feb 15th 2012 at 10:45 PM
Filed under Osho Tagged with meditation, Osho